အသက် ၁၈ - ED၊ နှောင့်နှေးသည့်သုက်လွှတ်ခြင်း၊ အလွန်အမင်းအစွန်းရောက်သော fetishes များ။ အောင်မြင်သောလိင် - ငါရောဂါပျောက်ကင်းသည်ဟုခံစားရသည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ကျွန်မထက်ပိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစတင်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါခရီးကိုချွတ်ပေးဆောင်ခဲ့ကြပုံရသည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာ, ငါသည်ခိုင်ခံ့စိုက်ထူရတဲ့အတွက်ဆက်ခံခြင်းနှင့်ကိုယ် ejaculated သည်အထိကွန်ဒုံးသုံးပြီးလိင်ဆက်ဆံရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုအတွက် ဦး တည်ချက်အချို့ကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်လမ်းနောက်ခံဖြင့်စတင်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် ED, DE နှင့်အတွေ့အကြုံများစွာခံစားခဲ့ရပြီးမှတ်မိနိုင်သည့် အချိန်မှစ၍ အစွန်းရောက်သော fetish များဖြစ်သည်။ ငါ ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာပထမ ဦး ဆုံးအရုပ်ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ နောက်နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာတော့ chatroulette၊
ငါအထက်တန်းကျောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ကငါ့ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးမကျေနပ်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟာ DE အလုပ်တွေနဲ့ handjobs တွေဆီကနေ DE ကြုံခဲ့ရတာပါ။ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယနှစ်၊ ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ပထမဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်ကွဲပြားသောအဖြစ်အပျက်လေးခု၌အစာမကြေနိုင်သည့်အပြင်ထိတ်လန့်ခြင်းလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေးကအဆုံးသတ်သွားပြီး၊ ကျောင်းတစ်ခုလုံးကအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုပြက်ရယ်ပြုခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်လုံးဝပျက်စီးသွားပြီးကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သည်။
ငါ့အငယ်တန်းတစ်နှစ်ရဲ့ဆောင်းရာသီမှာ YBOP ကိုထိမိခဲ့တယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟုအစပိုင်း၌ကျွန်ုပ်မယုံနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တွင်အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိ၊ ပြန်လည်စတင်သည်။
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးလေးလတစ်ဦးကျောက်တောင်အတှေ့အကွုံရှိကြ၏, ငါ့ PMO-အခမဲ့အလင်းတန်းများဖြာနေတဲ့အချိန်မှာသာလက်ထက်၌နှင့်ငါ့ relapses အမြဲ All-ထွက် porn Bing သို့လှည့်။ ဤသူသည်ငါကျောင်းများပြောင်းခဲ့ရပြီးငါတောင်မိန်းကလေးတစ်ဦးနမ်းခြင်းမရှိဘဲလအတွင်း သွား. ငါ၏အမိဘများနှင့်ကွဲကွာ, ငါ့အသက်တာ၏အခက်ခဲဆုံးကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအတိတ်ထဲမှာဒါအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တူသောငါဒါရိုးရှင်းစွာအပေါငျးတို့သညျငါ၏ပြဿနာများ porn ပိတ်ပင်တားဆီးမှုထွက်စေစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျသလှုံ့ဆျောမှုပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးထွားမှုအတွက်တွန်းအားအဖြစ်ကဤခက်ခဲတဲ့ကြိမ်သုံးစွဲဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မအိပ်ရာ သွား. Adderall ယူပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်မတိုင်မီစာအုပ်တွေဖတ်နေ, အလေးရုတ်သိမ်းရေးစတင်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းပို့စ်တန်ချိန်ဖတ်နေနှင့်ငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာညစ်ညမ်း blockers ကို install, ဗီဒီယို၏နာရီကိုကြည့်မ-FAP အကြောင်းကိုအလေးအနက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်မအလေးအနက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးနောက်တိုးတက်မှုပိုကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်; ငါနေဆဲ relapsing ခံခဲ့ရသော်လည်းငါ့အလင်းတန်းများဖြာအရှည်တိုးမြှင့်ထားရှိမည်။
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးကြီးတွေခက်ခဲ mode ကို Streak 50 ရက်ပေါင်းခဲ့ပေမယ့်ငါအကုန်လုံးသုံးနေ့က porn မူးရူးသို့ပြန်ရောက်သွားတယ်သည့်အခါငါ့နှလုံးလည်းကျိုးခဲ့သည်။ ငါအသစ်ကတွေ့ရှိခဲ့သန်နိဋ်ဌာနျနှင့်အတူနောက်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောက်ဖို့စီမံလျက်, မှာပါတဲ့ 90 နေ့ကခက်ခဲ mode ကိုရောက်ရှိဖို့နိုင်ခဲ့သည်။
ဒီပြီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်မရဲ့ပြproblemsနာတွေကနောက်ကွယ်မှာပါလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုစမ်းသပ်နိုင်ခြင်းမပြုမီတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့ခြင်း၏ကြီးမားသောအမှားကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်မိပြီး၊ နောက်အရက်မူးမူးနောက်ကျော့ကျသွားသည်။ ငါလမ်းလွဲသွားပြီးနောက်ငါအားလုံးအတူတူအရှုံးမပေးဖို့မယုံနိုင်လောက်အောင်နီးစပ်လာ၏။ ကျွန်တော့်ရဲ့လပေါင်းများစွာကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကကျွန်တော့်ကိုမကုသနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်လာတယ်။
ငါ့ကိုအထဲမှာတစ်ခုခုသို့သော်အရှုံးမပေးရန်ငြင်းဆန်, ငါအသတ်မရှိညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် MO ကိုထွက်ခုတ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးအချိန်ကွဲပြားခြားနားသောခံစားခဲ့ရနှင့်လအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်မ porn blockers နှင့်နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြန်ရောက်မိန်းကလေးငယ်များနဲ့ငါ့ယုံကြည်မှုအဟောင်းချိုင်းထောက်ကိုဖျက်လိုက်ပါ။ ငါပြန်သွားကြသည်မှအကြိမ်အနည်းငယ်နီးကပ်သို့ရောက်လာသည်ကား, ဒါပေမယ့်ငါနေမကောင်းခံစားချက်ငါငါ့အနတ်ဆိုးများအတွက်ပေး၏အခါတိုင်းခံစားခဲ့ရကြောင်းအောက်မေ့တော်မူ၏။
ဒီ4လအတွင်းပြီးနောက်ကျွန်မလုံးဝမမျှော်လင့်ဘဲနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံကရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတညဉ့်ပါတီမှာတွေ့ဆုံခဲ့သူတစ်မိန်းကလေးတစ်မတိုင်မီ Facebook ပေါ်မှာငါ့ကို Message လှမ်းပို့နှင့်ကျော်လာမှအကြှနျုပျကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တက်နှင့်ချိတ်ဆက်, သူမကငါ့ကိုနည်းနည်းမှုတ်ပြီးတော့သူမကကျွန်မကိုသူမ၏ fuck ဆိုတဲ့ချင်ခဲ့တယ်ပြောတယ်။ ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ငါ၌ငါ့အပြင်ဘက်အာရုံကြောဆောင် ခဲ့. , ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယခုအချိန်တွင်အတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရမသွားပါစေခဲ့ပါဘူး။ ငါအတွက်ကွန်ဒုံးကိုတင်တဲ့အခါမှာအပြည့်အဝခက်ခဲဖြစ်လာသည်နှင့်ထွင်းဖောက်။ ငါသူမ၏အတွင်းပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်ပထမစက္ကန့်ကတန်ဖိုးရှိညစ်ညမ်းတိုက်ခိုက်နေတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲနေ့ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါခံစားရတယ် Euphoria ပီတိခံစားချက်ငါစာသားတဆယ်စက္ကန့်အတွင်း လာ. , ဒါပေမယ့်ချွတ်ရယ်နီးပါး ပြော. မကုန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကတစ်မိနစ်အကြာမှာတော့ကျွန်မခက်ခဲဖြစ်လာသည်နှင့်နောက်တဖန်ထိုးဖောက်။ ဤအချိန်ငါ6သို့မဟုတ်7မိနစ်ကြာမြင့်နှင့်သူမ၏ cum ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါအောင်မြင်စွာနောက်ဆုံးစုံတွဲရက်ပေါင်းနောက်တဖန်သူမ၏နှင့်အတူလိင်ခဲ့ကြပါပြီ, ငါမရှိ, ပြဿနာများကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြ။
ဒီဖတ်နေသူအပေါငျးတို့ငါ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမကိစ္စကြောင့်မြင်တွေ့ရပုံဖှယျ, သင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးမှာအလင်းကိုမှရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်မဆိုမူးယစ်ဆေးထက်မသည် သာ. ကြီးမြတ်ရှိသည်မြင့်မားသောကြောင့်လိင်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးထက်ကျော်လွန်သွား, သို့မဟုတ်သက်သာ၏အဓိပ္ပာယ်ဈငါနောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူကျန်းမာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်ဟုခံစားရ; ငါသည်ဤစွဲကျော်လွှားထံမှခံစားရယုံကြည်မှုတောင်များကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့ငါ့ကိုခံစားရစေသည်။
ကနဦးချိုင်းထောက်အဖြစ် porn blockers ကိုသုံးပါ, သင်မူကားအဆင်သင့်ခံစားရသည့်အခါသူတို့အဖျက်ပစ်ပါမည်။ ဤသည်ငါ့အဘို့အဓိကခြေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
Relapses များသောအားဖြင့်တစ်ပူမိန်းကလေး၏ရုပ်ပုံမှာရှာဖွေနေ tinder သုံးပြီးသို့မဟုတ် omegle သွား၏ထင်ရသောအပြစ်မဲ့လုပ်ရပ်နှင့်အတူစတင်ဖြည်းဖြည်းတက်တွား။ ဤသည် Micro-relapses နီးပါးအမြဲအပြည့်အဝထုတ် Bing မှအရှိန်မြင့်လာတယ်။ အောင်မြင်စွာ porn တိုက်ဖျက်ဖို့, သင်ထားတဲ့လက်မအထိကိုမပေးနိုငျသညျ။
အလေးနှင့်စာဖတ်ခြင်းစာအုပ်တွေကိုဖယ်ရှားစတင်ပါ။ သင်စိတ်ကျရောဂါကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါမည်ခံစားရကောင်းဖို့၏ကတည်းက။ စာအုပ်တွေဖတ်နေပထမဦးဆုံးဌာန၌ porn ရန်သင့်အားဦးဆောင်သည့်ဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းကျေနပ်နေချိန်မှာဒါ့အပြင်အလေးရုတ်သိမ်းရေးသင်တက် pent စွမ်းအင်နှင့်စိတ်ပျက်လွှတ်ပေးရန်ခွင့်ပြု
စကားပြောရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာပါ။ ကျနော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသူ၊ သူမရှိရင်ဒီခရီးကိုရောက်ဖို့ခွန်အားကိုငါရှာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနောက်တစ် ဦး ကတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ကိုစပြီးကြိုးစားတော့မယ်။ သူ့ကိုလမ်းတစ်လျှောက်ကူညီဖို့ငါစီစဉ်နေတယ်။
အားလုံးအထက်တွင်: အစဉ်အဆက်အစဉ်အမြဲစွန့်လွှတ်ဘယ်တော့မှမ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုထင်ပုံကို measly, သို့မဟုတ်သင်ခဲယဉ်း mode ကို၏ 90 ရက်အကြာမှာတွေ့မြင်ဘယ်လောက်နည်းနည်းရလဒ်များကို, သငျသညျ။ သင်သည်သင်၏စွဲကြောင့်အနည်းငယ်အားနည်းစေသည်တိုက်ဖျက်ရန်နေ့တိုင်းအတွက်မပေးရပါမည်။ ဤသည်ခရီးတစ်ခုလွယ်ကူသောတဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျိုးနပ်သည်။
LINK - နောက်ဆုံးတွင်အောင်မြင်မှု - အရှုံးမပေးပါနှင့် (PIED Cured)